November 16, 2021 N88LeaveaComment on बुधबार कसको पुजा गर्दा के फल पाइन्छ ?
हिन्दूधर्मशास्त्रअनुसार बुधबारको दिन बुध ग्रहप्रति समर्पित छ । बुधबारको व्रत बुधग्रहको कुप्रभावको शान्तिकामनाका निम्ति एवं धन, बुद्धि, विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि पालना गर्ने गरिन्छ । यस दिन विशेष गरी विथाल–देव (कृष्णको अवतार) को पूजा गरिन्छ । कुनै नयाँ कामको थालनाका लागि बुधबारको दिन अति शुभ मानिन्छ । साथै यस दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले […]
दोस्रो बच्चा जन्माउनु अघि महिलाले ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा, सावधान नत्र यस्ताेसम्म हुनसक्छ !
November 16, 2021 November 17, 2021 N88LeaveaComment on दोस्रो बच्चा जन्माउनु अघि महिलाले ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा, सावधान नत्र यस्ताेसम्म हुनसक्छ !
अधिकाशं दम्पतीहरुमा पहिलो सन्तानको कति अन्तराल दोस्रो सन्तान जन्माउन भन्नेमा दोधार रहने गरेको छ।यस्तोमा एक मात्र सन्तान जन्माउनेहरुका कारण एकल बच्चाहरु साथीभाईसँग घुलमिल नहुने भएकाले उनीहरुमा समाज तथा परिवारसँग एकाकार हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले निश्चित समयान्तरमा दोस्रो बच्चा जन्माउनु नै राम्रो हो। तर, दोस्रो पटक गर्भधारण गर्दा भने केहि कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। […]
पठाओ दु’र्घटना हुदाँ चालक र सवारी गरेर दुवै जनाको मृ’त्यु
November 16, 2021 N88LeaveaComment on पठाओ दु’र्घटना हुदाँ चालक र सवारी गरेर दुवै जनाको मृ’त्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीमा पठाओ स्कुटर दु’र्घटना हुदाँ चालक र सवारी गरेर दुबै जनाको मृ’त्यु भएको छ । कलंकीको सिता पेट्रोल पम्प नजिक अपरान्ह् पौने पाँच बजे ओम जनता यातायातको बसले पठाओ स्कुटरलाई ठ’क्कर दिदाँ दुवै जनाको मृ’त्यु भएको महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंले जनाएको हो । प्र’हरीका अनुसार मु’त्यु हुनेमा धादिङ घर भइ अहिले थानकोट […]
November 16, 2021 N88LeaveaComment on ससुराली घरमै झु’ण्डिए ज्वाई, यस्तो नोट भेटिए पछि सबै छक्क
काठमाडौ । धनुषामा एक जना युवक ससुराली घरमै झुण्डिएको अवस्था मृ त फेला परेका छन् । उनले लेखेको एक नोट पनि फेला परेको छ । जसमा उनले आफुले यस्तो निर्णय लिनुमा ससुरालीका सबै परिवार कारण भएको बताएका छन् । मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर २ का २६ वर्षीय रामचन्द्र महतो सोमवार राती ससुराली घरमा झुण्डिएका हुन् […]
काठमाडौ । महत्वकांक्षी योजना लिएर चितवनमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम थालेका धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले अन्तत रंगशालाको कामवाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ठूलो लगानीमा रंगशालाको काम थालेका उनीहरुले अब सो रंगशालाको जिम्मा लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ऋण डुवेको र आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै बाचा […]
November 16, 2021 N88LeaveaComment on शरीरमा मुसा किन आउँछ? यस्ता छन् कारण
मानिसको छालामा विभिन्न खालका समस्याहरु आउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि मुसा आउने समस्याका कारण धेरै मानिस चिन्तित हुनन्छन् । तपाईं मध्ये धेरैको हात गोडा तथा शरीरका विभिन्न भागमा मुसा आएको हुनसक्छ । तर शरीरमा मुसा के कारणले आउँछ भन्ने बिषयमा भने आम मानिसलाई जानकारी नहुन सक्छ । मुसा एक प्रकारको भाइरल संक्रमण हो । यो […]
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसँग अर्बपति विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छः दिनेश त्रिपाठी
November 16, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसँग अर्बपति विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छः दिनेश त्रिपाठी
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग धनाढ्य विनाद चौधरीको भन्दा बढी भएको खुलासा भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘हिजो ओलीले पनि भिजेलान्ते प्रयोग गरेकै हो। अहिले ओलीकै शैली चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपनाएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक […]
November 16, 2021 N88LeaveaComment on अप्सरा दिदी तिमीलाई सेतो सारीमा कसरी हेर्नु ?
ध्रुव लम्साल फागुनको महिना थियो । स्कुल लागेको दुई महिना पूरा भएको थिएन । कतिपय विद्यार्थीले किताबमा गाता हाल्न भ्याएका थिएनन् । राम्रो गाता हाल्नेले थपलियाको पसलमा गैंडा चुरोटको पेटी अर्डर गर्थे, एक सुक्का पथ्र्यो एउटालाई । ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ थियो । कतिपयले गातै नहाली वर्ष कटाउथे । जे होस् एकखालको उमंग थियो गाउँमा […]